Farshaxanka kala duwan wuxuu isku daraa Dareenka Fardaha iyo Safarka Cajiibka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Farshaxanka kala duwan wuxuu isku daraa Dareenka Fardaha iyo Safarka Cajiibka ah
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
by Rita Payne - khaas u ah eTN
Farshaxanka cajiibka ahi wuxuu isku daraa fardaha iyo safarka
Written by Rita Payne - khaas u ah eTN
Saaxiib aan wada leenahay ayaa i baray shaqada fannaankii Ingiriiska ee kartida badnaa, Marcus Hodge. Waxay ii soo dirtay sawirro shaqadiisa, waxaana i dul istaagay sawirradiisii ​​cajiibka ahaa ee aadka u wanaagsanaa ee fardaha, dibida, iyo lo'da taas oo ka dhigtay mid dareemeysa inay ka soo boodi doonaan shiraaca.
Farshaxanku wuxuu leeyahay bandhig keli ah oo ka socda Osborne Studio Gallery inta lagu jiro bisha Oktoobar.
Waxa diiradda la saarayaa bandhiggan gaarka ah waa dunida faraska laga soo bilaabo safarradii farshaxanka labadii sano ee la soo dhaafay.
Waxay ahayd awoowayaashii fanaaniinta oo huriyay jaceylkiisii ​​ahaa inuu u soo baxo inuu marka hore soo sahamiyo dalka ka dibna adduunka oo uu ku duubo farshaxanka.
Aad ayaan u xiiseynayay oo waxaan doonayay inaan wax badan ka ogaado taariikhdiisa. Waxaan ogaaday in Hodge, oo dhashay 1966 -kii, uu soo saaray shaqo aad u xiiso badan oo uu ku dhiirrigeliyay safaradiisii ​​Andalucia ilaa Hindiya.
Dadka jecel farshaxanka ayaa awoodi doona inay ku daawadaan sawirrada Hodge bandhigiisa kaliye ee soo socda Osborne Studio Gallery laga bilaabo Oktoobar 5-28, 2021. Ururintani waxay isu keentaa sawirro ka mid ah safarradii farshaxanka labadii sano ee la soo dhaafay waxayna sahamisay adduunka faraska, laga soo bilaabo fardaha Marwari ee Rajasthan, fardaha circus ee caalamiga ah ee Monaco, ilaa faracyada iyo fardaha Carabta ee Bariga Dhexe.
Hodge waxaa barbaariyey awoowayaashiis iyo ayeeyadiis oo sannado badan qaatay gudaha Hindiya, waxayna damiyeen dantiisii ​​ahayd inuu baxo oo uu bilaabo inuu dalka sahamiyo. Ilaha ugu muhiimsan ee dhiirrigelinta bandhiggan wuxuu ahaa Bandhigga Geela ee Nofeembar ee Pushkar, Rajasthan, oo ah mid ka mid ah waaya -aragnimada safarka ugu weyn ee Hindiya, oo lagu daawaday heer aad u sarreeya. Wuxuu sharraxay sida bandhiggu u yimid: “Fursaddu waxay u kacday inaan ku soo bandhigo koox kale oo ka shaqaysa goobta sawir -gacmeedka ee Osborne halkaas oo aan ku lahaa bandhig kaligeed oo kaligeed ah. Waxaan safarro badan ku tagay Hindiya sanadihii la soo dhaafay oo waxaan booqday magaalada Pushkar intii lagu jiray carwadii geela, afar ama shan jeer.
“Pushkar waa magaalo yar oo aad u qurux badan, oo aad ugu xurmaysan Hindus, taas oo nolosha u soo baxda carwadda geela ee sannadlaha ah. Waad ku farxi kartaa xamaasadda waddooyinka laakiin waxaad dib ugu laaban kartaa barxadaha saqafka yar ee deggan marka loo baahdo. Goob aad u qurux badan oo lagu raaxeysto kala duwanaanshaha iyo deganaanshaha weyn. ”
"Laakiin ka hor bilowgii masiibada waxaan booqday El Rocio oo ku taal Andalucia halkaas oo ay ku leeyihiin xaflad kale oo weyn, mar labaadna boqolaal faras iyo dad ka kala yimid gobollo kala duwan."
Kadib shan sano oo lagu baranayey farsamooyinkii Old Master ee Palma, Mallorca, Hodge wuxuu magaciisa ka dhigay sawirqaade sawir. Markii ugu horraysay wuxuu u safray Hindiya sannadkii 2000. Safarkan wuxuu ahaa bilowgii xiisaha xooggan ee Hindiya, dhaqankeeda, muuqaalka dhulka iyo tayada ruuxiga ah. In kasta oo bandhigiisa soo socda uu leeyahay mawduuc fardaha, haddana qaabkiisa ayaa si joogto ah u kobcaya si uu u noqdo mid dhiiran oo ka fudud, marmarka qaarkood sawir gacmeedku wuxuu siiyaa fursad soo -saaris.
Sawiradu waxay u muuqdaan inay eegaan xayawaanka iyo dadka, dhismaha iyo muuqaalka. Sida laga soo xigtay Hodge, “Mawduucu waa dhiirigelin laakiin runtii waa dheelitirka u dhexeeya taas iyo u adeegsiga madal si loo abuuro natiijo dhab ah oo firfircoon. Samaynta dusha sare iyo xiisadda rinjiyeynta runtii waa mid muhiim u ah matalaadda sawirka iyo marka ay guuleysato waxaa jira is -afgarad wanaagsan oo u dhexeeya labada. ”
Hodge wuxuu leeyahay wuxuu ku soo noqdaa dulucda fardaha maxaa yeelay wuxuu si joogto ah uga helaa wax xiise leh oo indho -indhayn ah oo iyaga ku saabsan - isku -dhac yaab leh oo qurux iyo xariifnimo farsamo. In kasta oo ay jiraan isbeddelo qaab -dhismeed, hal mawduuc oo waara, oo ugu weyn, waa Hindiya. Wuxuu leeyahay, “Farsamooyinka rinjiyeynta waxay ka gudbaan metelaad ilaa abstract iyo gadaal maxaa yeelay waayo -aragnimada badan ee aad halkaas ku leedahay, waxay u baahan tahay jawaab ka duwan. Xayawaan qurxoon ama muuqaal leh ayaa iga rabaa inaan si daacadnimo ah u rinjiyeeyo oo aan isku dayo inaan ku dul abuuro shiraaca rinji ahaan labadaba qancinaya jir ahaan iyo matalaad run ah oo daacad ah oo mawduuca ah. ” Mawduucyada kale, sida dhinaca taariikheed ee Albaabka Hindiya ama Jebinta Wareegga ee sawirrada taxanaha Varanasi, waxay u baahan yihiin hab aad u kala duwan. Tani waa waxa waayo -aragnimada sii nooleeya oo xiiso u leh isaga.
In kasta oo diiradda shaqadiisa ay inta badan ku saabsan tahay Hindiya iyo El Rocio ee Spain waxaa sidoo kale jira sawirro dhowr ah oo ka yimid Faransiiska halkaas oo aabbihiis (sidoo kale farshaxan yahay) ku nool yahay. Hodge wuxuu meesha ka saarayaa soo jeedin kasta oo ah in bandhiggu kaliya rafcaan u noqon karo dadka booqday Hindiya. "Ma filayo. Sawirada waxaa lagu raaxaysan karaa labadaba heer matalaad iyo sida sawirrada iyadoon loo eegin ujeeddada. Qorrax -dhaca quruxda badan waa qorrax -dhac qurux badan meel kasta oo ay ka dhacdo. ”
Hodge wuxuu bilaabay rinjiyeynta markii uu dhiganayay iskuulka farshaxanka dhaqanka ee Mallorca isagoo 25 -jir ah. Hadda waxaan sidoo kale wax ku baraa dhowr fasal toddobaadkii dugsiga farshaxanka sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan sii gudbiyo qaar ka mid ah. Fanaaniin badan oo kala duwan ayaa i xiiseynaya. Laakiin waxaan u malaynayaa inay dhammaantood wadaagaan tayada ay rinjiga u isticmaalaan si aad u cad oo xor ah. Sidoo kale, waqtigan waxaan si gaar ah ugu raaxaysanayaa farshaxanka Indian Mughal ee Mughal, oo aad u sii nooleeyey markii aad bilowdo inaad wax ka akhrido jilayaasha ku jira. ”
Kuwa aan awoodin inay booqdaan bandhigga shaqsi ahaan waxay ku arki karaan sawirrada bogga maktabadda Osborne iyo Bogga gaarka ah ee Hodge .
Markii la weydiiyay qorshihiisa mustaqbalka Hodge wuxuu leeyahay: “Waxaan u malaynayaa, marka ay u muuqato mid caqli gal ah, inaan dib ugu laabto Hindiya oo aan halkaas ka sii shaqeeyo oo aan arko waxa dhaca. Ma jecli inaan sameeyo qorshayaal aad u badan, laakiin inaan helo meesha ku soo waceysa oo u furan wax kasta oo dhaca. ”
Rita Payne - khaas u ah eTN